Soumis par Andry Mamina le ven, 03/10/2017 - 14:20
FAMBOLENA ANANDRANO (cresson) amin'ny koveta - atolotr'i Andreas Pattie :
Zaraiko eto fa sao mahasoa anareo anandrano nambolena taminy koveta :
- tsy asina lavaka ny koveta a.
- Asiana tany antsasaky ny koveta dia afafy ny voan'anandrano ary totofana tany kely .
- Mila tondrahana isan'andro, tsy mila fenoina rano be ( Atao mando ilay tany). 3 herinandro izao izy io amin'ny sary io.
Toerana hividianana ny voan'anana :
Lire la suite de Fambolena anandrano
Sakafo voalanjalanja (tapany 3)
Soumis par andry le sam, 01/07/2017 - 14:08
NY SAKAFO VOALANJALANJA (tapany 3) - L’équilibre alimentaire (3ème partie) iarahana amin'i Lobo Randria
FAMPIHARANA : (sary nindramina ihany)
Fantatro fa efa haintsika ny betsaka amin'ireo fahalalana nolazaiko ireo, fa ny fanotaniako dia izao: aiza ho aiza ny fampiaranao azy andavanandro ?
Ireo ny “idealy” nefa noho ny antony maro samihafa dia mety ho part 1 ihany ohatra no vitanao, efa tsy maninona izay fa ny manafoana (supprimer) sokajin - tsakafo no tsy mety.
Lire la suite de Sakafo voalanjalanja (tapany 3)
Sakafo voalanjalanja (tapany 2)
Soumis par andry le sam, 01/07/2017 - 14:06
NY SAKAFO VOALANJALANJA (tapany 2)
- L’équilibre alimentaire (2ème partie) iarahana amin'i Lobo Randria (sary nindramina fotsiny)
Ahoana ny fomba hihinana an’ireo rehetra ireo?
Impiry aloha no mila misakafo e?...
Lire la suite de Sakafo voalanjalanja (tapany 2)
Lire la suite de Ny sakafo voalanjalanja (tapany 1)
Soumis par Andry Mamina le dim, 07/10/2016 - 07:36
Mandroso hatrany ny asa. Taorian'ny fifanakalozana tamin-dramatoa Benedetta, tompon'ny pejy : "Fatto in casa da Benedetta" (izay raha adika dia hoe :"fait maison" na vita an-trano) dia mahafaly ny milaza amintsika fa nahazo alalana taminy aho hizara ny recette-ny ato amintsika (izay ezahako adika amin'ny fiteny malagasy) ho fahaizana ho an'ny maro.
Ho fankasitrahana azy kosa, dia hiezaka koa aho handika ireo recette-ntsika ato, tiany mba hozaraina any aminy ho hitan'ny olona maneran-tany, satria io pejiny io dia efa mihoatry ny 1.000.000 ny mpanaraka azy.
Lire la suite de Fatto in casa da Benedetta
Lire la suite de Ny frezy - fraise
Ody am-bavafo - "gouter"
Soumis par andry le ven, 07/17/2015 - 02:31
Ireto atolotra ampifaliana ireto dia azo atao ody am-bavafo na "gouter" ho an'ny ankizy
de Vero Randriam
Lire la suite de Ody am-bavafo - "gouter"
Laoka tsy misy hena
Soumis par andry le mer, 07/15/2015 - 11:08
Ireto indray nary ny soson-kevitra azo atao laoka nefa tsy misy hena sao mba mahasoa anao o, dia mazotoa
Lire la suite de Laoka tsy misy hena
Fahafantarana ny haben’ny lasitra
Soumis par andry le mer, 07/15/2015 - 00:21
Zaraiko eto sao misy mila azy:
Fahafantarana ny haben’ny lasitra (moule ) ampiasaina mba hifanaraka amin’ny zavatra ilaina ( ingrédients) sy ny isan’ny olona.
Lire la suite de Fahafantarana ny haben’ny lasitra
Ny karazan-tsakafo tokony ohanina mandritry ny herinandro
Soumis par andry le mer, 07/15/2015 - 00:07
zaraina ampifaliana hatrany fa mahasoa ireto soso-kevitra sakafo ireto
NY KARAZAN-TSAKAFO TOKONY OHANINA MANDRITRA NY HERIN'ANDRO:
Lire la suite de Ny karazan-tsakafo tokony ohanina mandritry ny herinandro